သင့်ရဲ့ ဖူးစာကို ရှာနိုင်မယ့် နည်းလမ်း – Gentleman Magazine
သငျ့ရဲ့ ဖူးစာကို ရှာနိုငျမယျ့ နညျးလမျး
ကျွန်တော်တို့ လူသားအားလုံးဟာ တစ်သက်လုံး တူတူနေရမယ့် ဖူးစာပါသူတွေကို ရှာတွေ့ချင်ကြတာပါပဲ။ သင့်ရဲ့ ဖူးစာပါသူနဲ့တွေ့ရင် သင် ဆွဲဆောင်မှုကို ထိန်းချုပ်မရနိုင်အောင် ခံစားရပြီး အလိုလို ရင်းနှီးနေသလို ခံစားရတတ်ပါတယ်။ ရုပ်ရှင်တွေကလဲ အဲလို အချစ်ဇာတ်လမ်းမျိုးကို အသားပေးရိုက်ထားကြတာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ ဖူးစာ ဘာကြောင့် ဖြစ်လာသလဲ ဆိုတာကိုတော့ သေသေချာချာ မသိသေးပါဘူး။ စိတ်ပညာကတော့ လူနှစ်ယောက်ကို လိုက်လျောညီထွေ ဖြစ်အောင် ဘာက လုပ်ပေးလဲဆိုတာ ရှာတွေ့ခဲ့ပြီ ဆိုပါတယ်။
Dating Site တွေကတော့ သင့်နဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး အကြိုက် ဝါသနာတူသူတွေကို ရှာပေးပါတယ်။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး အကြိုက် ဝါသနာတူမှ ဖူးစာ ဆုံနိုင်တာ ဆိုပါတယ်။ အဲဒါက နားထောင်လို့ကောင်းပေမယ့် တကယ့် လက်တွေ့မှာတော့ မှားနေပါတယ်။
စမ်းသပ်ချက်တစ်ခုမှာ တွေ့ရတာကတော့ ပျော်ရွှင်သူနဲ့ မပျော်ရွှင်သူ စုံတွဲတွေဟာ လိုက်လျောညီထွေ ဖြစ်မှုမှာ တူတူလောက်ပါပဲ။ ပျော်ပြီး ချစ်ခင်နေကြတဲ့ စုံတွဲတွေကတော့ သူတို့ဘဝမှာ လိုက်လျောညီထွေ ဖြစ်မှုက အရေးမပါပါဘူး လို့ ဆိုကြပါတယ်။ အချစ်ကို လုပ်တာ သူတို့ ဖြစ်ပြီး လိုက်လျောညီထွေမှုက လုပ်တာ မဟုတ်ဘူးလို့ ပြောကြပါတယ်။
ဒါပေမယ့် မပျော်တဲ့၊ အဆင်မပြေကြတဲ့ စုံတွဲတွေကတော့ မေးလိုက်တာနဲ့ လိုက်လျောညီထွေ မဖြစ်မှုကိုပဲ အပြစ်ပုံချကြပါတယ်။ လက်ထပ်ခြင်း၊ အိမ်ထောင်ပြုခြင်းမှာ လိုက်လျောညီထွေ ဖြစ်ဖို့ အရမ်းအရေးကြီးတယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။ သူတို့က တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် လိုက်လျောညီထွေ မဖြစ်ကြဘူးလို့ ထင်ကြပါတယ်။
မပျော်ရွှင်ကြသူ၊ အိမ်ထောင်ရေး အဆင်မပြေကြသူတွေက လိုက်လျောညီထွေ မဖြစ်တာကို အပြစ်ပုံချကြတယ်။ သူတို့ဟာ အောင်မြင်တဲ့ အိမ်ထောင်ရေးဟာ သင်တို့နှစ်ယောက် ဘယ်လောက် အကြိုက်တူတယ်ဆိုတာနဲ့ မဆိုင်ပဲ နှစ်ယောက်တူတူ လက်တွဲချင်စိတ်နဲ့ပဲ ဆိုင်တယ်ဆိုတာ မသိကြပါဘူး။
ယဉ်ကျေးမှုအရ မိဘသဘောတူ လက်ထပ်ခံရသူတွေဟာ အမေရိကန်တွေထက် ပိုပြီး ကြာကြာ လက်တွဲကြပြီး ပိုပြီးပျော်ကြပါတယ် တဲ့။ သူတို့တွေဟာ မသိစိတ်ကနေ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် စိတ်ထဲနှစ်ထားကြပြီး တခြားသူတစ်ယောက်ကို ချစ်ဖို့ မစဉ်းစားကြတော့လို့ပါ။
အမေရိကန်မှာကျတော့ လွတ်လပ်ခြင်းကို အရမ်းတန်ဖိုးထားကြပါတယ်။ ချစ်ဇာတ်လမ်းမှာ ပြသနာလေးတွေ ရှိလာတဲ့အခါ နောက်တစ်ယောက်ကို မသိစိတ်ကနေ စဉ်းစားလာကြပါတယ်။ အဲဒိမှာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် လိုက်လျောညီထွေ မဖြစ်လို့ လက်မတွဲနိုင်ဘူး ဆိုတာတွေ အကြောင်းပြချက် အဖြစ် ပြောကုန်ကြတာပါပဲ။
တစ်သက်တာ လက်တွဲဖော် ရှာဖွေခြင်း
ဒီလောက်ဆို တစ်သက်တာ လက်တွဲဖော်ကို လိုက်လျောညီထွေမှူနဲ့ ရှာလို့မရမှန်း သိလောက်ပါပြီ။ ဒါဆို ဘယ်လို ရှာမလဲ??
လေ့လာချက်တွေမှာ တစ်စုံတစ်ခုကို အတူတူ တည်ဆောက်ဖူးတဲ့ (ဥပမာ စီးပွားရေး တူတူ လုပ်ဖူးတဲ့ ) စုံတွဲတွေဟာ အရှည်ကြာဆုံး လက်တွဲ နိုင်ကြပါတယ်။ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် ဘယ်လို ဆက်ဆံလဲဆိုတာဟာ ချစ်ဇာတ်လမ်း ကြာရှည်ဖို့ အခြေခံအကျဆုံး အချက်ပါ။
သင့်ရဲ့ လက်တွဲဖော်ဟာ သင့်ရဲ့ ဘဝ အိပ်မက်တွေကို ကူညီဖော်ဆောင် ပေးမှာပါ။ သင့်ကို အထင်ကြီးမှာ၊ လေးစားမှာ၊ မြတ်နိုးမှာပါ။ သင်တို့နှစ်ယောက်ဟာ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် သဘောထားပုံ အရှိန်အဟုန်ခြင်းလဲ တူနေရမှာပါ။
တကယ်လို့ သင်ဟာ သင့်ရဲ့ ဖူးစာဖက်ကို လိုက်ရှာနေသူဆိုရင်တော့ လိုက်လျောညီထွေမှုဆိုတာ သင်လုပ်တာဆိုတာ မှတ်ထားပါ။ အောင်မြင်တဲ့ချစ်ဇာတ်လမ်းအတွက် ဖော်မြူလာ အတိအကျ မရှိပါဘူး။
တကယ်လို့ သင် နောက်တစ်ခေါက် ဆွဲဆောင်မှုကို ထိန်းချုပ်မရနိုင်အောင် ခံစားရပြီး အလိုလို ရင်းနှီးနေသလို ခံစားရအောင် လုပ်နိုင်သူလေးနဲ့ တွေ့ရရင် သင့်ရဲ့ ဘဝအိပ်မက်ကို သူမ လေးစားသလား၊ အားပေးသလားဆိုတာ ဂရုစိုက်ကြည့်ပါ။ တကယ်လို့ သူမဟာ သင့် ပန်းတိုင်ကို လေးစားပြီး မနက်ဖြန်မှာ ဖြစ်မယ့် သင်ကိုမှ လက်ခံတာ မဟုတ်ပဲ ဒီနေ့ ရှိတဲ့ သင့်ကိုပဲ အရှိကို အရှိအတိုင်း လက်ခံခဲ့ရင်တော့ သင့်ရဲ့ ဖူးစာဖက်ကို တွေ့ခဲ့ရပြီလို့ မှတ်လိုက်ပါတော့။
ကြှနျတျောတို့ လူသားအားလုံးဟာ တဈသကျလုံး တူတူနရေမယျ့ ဖူးစာပါသူတှကေို ရှာတှခေ့ငျြကွတာပါပဲ။ သငျ့ရဲ့ ဖူးစာပါသူနဲ့တှရေ့ငျ သငျ ဆှဲဆောငျမှုကို ထိနျးခြုပျမရနိုငျအောငျ ခံစားရပွီး အလိုလို ရငျးနှီးနသေလို ခံစားရတတျပါတယျ။ ရုပျရှငျတှကေလဲ အဲလို အခဈြဇာတျလမျးမြိုးကို အသားပေးရိုကျထားကွတာပါပဲ။ ဒါပမေယျ့ ကြှနျတျောတို့ ဖူးစာ ဘာကွောငျ့ ဖွဈလာသလဲ ဆိုတာကိုတော့ သသေခြောခြာ မသိသေးပါဘူး။ စိတျပညာကတော့ လူနှဈယောကျကို လိုကျလြောညီထှေ ဖွဈအောငျ ဘာက လုပျပေးလဲဆိုတာ ရှာတှခေဲ့ပွီ ဆိုပါတယျ။
Dating Site တှကေတော့ သငျ့နဲ့ ကိုယျရညျကိုယျသှေး အကွိုကျ ဝါသနာတူသူတှကေို ရှာပေးပါတယျ။ ကိုယျရညျကိုယျသှေး အကွိုကျ ဝါသနာတူမှ ဖူးစာ ဆုံနိုငျတာ ဆိုပါတယျ။ အဲဒါက နားထောငျလို့ကောငျးပမေယျ့ တကယျ့ လကျတှမှေ့ာတော့ မှားနပေါတယျ။
စမျးသပျခကျြတဈခုမှာ တှရေ့တာကတော့ ပြျောရှငျသူနဲ့ မပြျောရှငျသူ စုံတှဲတှဟော လိုကျလြောညီထှေ ဖွဈမှုမှာ တူတူလောကျပါပဲ။ ပြျောပွီး ခဈြခငျနကွေတဲ့ စုံတှဲတှကေတော့ သူတို့ဘဝမှာ လိုကျလြောညီထှေ ဖွဈမှုက အရေးမပါပါဘူး လို့ ဆိုကွပါတယျ။ အခဈြကို လုပျတာ သူတို့ ဖွဈပွီး လိုကျလြောညီထှမှေုက လုပျတာ မဟုတျဘူးလို့ ပွောကွပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ မပြျောတဲ့၊ အဆငျမပွကွေတဲ့ စုံတှဲတှကေတော့ မေးလိုကျတာနဲ့ လိုကျလြောညီထှေ မဖွဈမှုကိုပဲ အပွဈပုံခကြွပါတယျ။ လကျထပျခွငျး၊ အိမျထောငျပွုခွငျးမှာ လိုကျလြောညီထှေ ဖွဈဖို့ အရမျးအရေးကွီးတယျလို့ ဆိုကွပါတယျ။ သူတို့က တဈယောကျကိုတဈယောကျ လိုကျလြောညီထှေ မဖွဈကွဘူးလို့ ထငျကွပါတယျ။
မပြျောရှငျကွသူ၊ အိမျထောငျရေး အဆငျမပွကွေသူတှကေ လိုကျလြောညီထှေ မဖွဈတာကို အပွဈပုံခကြွတယျ။ သူတို့ဟာ အောငျမွငျတဲ့ အိမျထောငျရေးဟာ သငျတို့နှဈယောကျ ဘယျလောကျ အကွိုကျတူတယျဆိုတာနဲ့ မဆိုငျပဲ နှဈယောကျတူတူ လကျတှဲခငျြစိတျနဲ့ပဲ ဆိုငျတယျဆိုတာ မသိကွပါဘူး။
ယဉျကြေးမှုအရ မိဘသဘောတူ လကျထပျခံရသူတှဟော အမရေိကနျတှထေကျ ပိုပွီး ကွာကွာ လကျတှဲကွပွီး ပိုပွီးပြျောကွပါတယျ တဲ့။ သူတို့တှဟော မသိစိတျကနေ တဈယောကျကို တဈယောကျ စိတျထဲနှဈထားကွပွီး တခွားသူတဈယောကျကို ခဈြဖို့ မစဉျးစားကွတော့လို့ပါ။
အမရေိကနျမှာကတြော့ လှတျလပျခွငျးကို အရမျးတနျဖိုးထားကွပါတယျ။ ခဈြဇာတျလမျးမှာ ပွသနာလေးတှေ ရှိလာတဲ့အခါ နောကျတဈယောကျကို မသိစိတျကနေ စဉျးစားလာကွပါတယျ။ အဲဒိမှာ တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ လိုကျလြောညီထှေ မဖွဈလို့ လကျမတှဲနိုငျဘူး ဆိုတာတှေ အကွောငျးပွခကျြ အဖွဈ ပွောကုနျကွတာပါပဲ။
တဈသကျတာ လကျတှဲဖျော ရှာဖှခွေငျး
ဒီလောကျဆို တဈသကျတာ လကျတှဲဖျောကို လိုကျလြောညီထှမှေူနဲ့ ရှာလို့မရမှနျး သိလောကျပါပွီ။ ဒါဆို ဘယျလို ရှာမလဲ??
လလေ့ာခကျြတှမှော တဈစုံတဈခုကို အတူတူ တညျဆောကျဖူးတဲ့ (ဥပမာ စီးပှားရေး တူတူ လုပျဖူးတဲ့ ) စုံတှဲတှဟော အရှညျကွာဆုံး လကျတှဲ နိုငျကွပါတယျ။ တဈယောကျကို တဈယောကျ ဘယျလို ဆကျဆံလဲဆိုတာဟာ ခဈြဇာတျလမျး ကွာရှညျဖို့ အခွခေံအကဆြုံး အခကျြပါ။
သငျ့ရဲ့ လကျတှဲဖျောဟာ သငျ့ရဲ့ ဘဝ အိပျမကျတှကေို ကူညီဖျောဆောငျ ပေးမှာပါ။ သငျ့ကို အထငျကွီးမှာ၊ လေးစားမှာ၊ မွတျနိုးမှာပါ။ သငျတို့နှဈယောကျဟာ တဈယောကျကိုတဈယောကျ သဘောထားပုံ အရှိနျအဟုနျခွငျးလဲ တူနရေမှာပါ။
တကယျလို့ သငျဟာ သငျ့ရဲ့ ဖူးစာဖကျကို လိုကျရှာနသေူဆိုရငျတော့ လိုကျလြောညီထှမှေုဆိုတာ သငျလုပျတာဆိုတာ မှတျထားပါ။ အောငျမွငျတဲ့ခဈြဇာတျလမျးအတှကျ ဖျောမွူလာ အတိအကြ မရှိပါဘူး။
တကယျလို့ သငျ နောကျတဈခေါကျ ဆှဲဆောငျမှုကို ထိနျးခြုပျမရနိုငျအောငျ ခံစားရပွီး အလိုလို ရငျးနှီးနသေလို ခံစားရအောငျ လုပျနိုငျသူလေးနဲ့ တှရေ့ရငျ သငျ့ရဲ့ ဘဝအိပျမကျကို သူမ လေးစားသလား၊ အားပေးသလားဆိုတာ ဂရုစိုကျကွညျ့ပါ။ တကယျလို့ သူမဟာ သငျ့ ပနျးတိုငျကို လေးစားပွီး မနကျဖွနျမှာ ဖွဈမယျ့ သငျကိုမှ လကျခံတာ မဟုတျပဲ ဒီနေ့ ရှိတဲ့ သငျ့ကိုပဲ အရှိကို အရှိအတိုငျး လကျခံခဲ့ရငျတော့ သငျ့ရဲ့ ဖူးစာဖကျကို တှခေဲ့ရပွီလို့ မှတျလိုကျပါတော့။
Previous: ဘ၀အောင်မြင်တိုးတက်ဖို့ မေးခွန်း(၅)ခု
Next: သင့်ကို သူမတိတ်တခိုးချစ်နေကြောင်း သိရှိနိုင်မည့် လက္ခဏာများ